Nanangana trano fametrahana entana vaovao
Efa manana trano fametrahana entana eny Anjoma ny BNGRC fa hita hoe tsy ampy izany nohon'ny fahakelezany raha hoharina amin'ny tokony ilaintsika aty amin'ny faritra Atsinanana izany. Noho izany indrindra no antony nananganana tranobe iray.
Tsy mbola notokanana fa nojerena omaly alarobia 26 may 2021 ny tranobe anakiray ho fametrahana entana na "magasin de stockage" avy amin'ny BNGRC etsy amin'ny voirie. Raha araka ny fantatra dia mbola hisy fanamboarana vaovao anakiray ho apetraka eo amin'io toerana io ihany mba hitantanana ny loza sy ny tandinon-doza.
Ny antony nananganana ity tranobe ity ihany koa moa dia hanamorana ny fahasahiranana any amin'ny fitadiavana toerana rehefa misy ny traboina dia mandeha midodododo mitady sekoly na mitady toerana hialofana ka mety hanembatsembana ny fandaharam-potoana eny anivon'ny sekoly sy ny toerana azo hialofana izany. Antony iray hanampiana antsika ity ivo-toerana ity izay azo antsoina ihany koa ho "multi-fonction" satria dia azo ampiasaina tsara hialofan'ireo tsaboina no sady azo atao ho toeram-pametrahana entana.
Trano izay mirefy 18 metatra ny halavany, 9 metatra ny sakany, 6 metatra hahavony, ary mahazaka 700 hatramin'ny 750 taonina ny entana na sakafo azo ampidirina ao anatiny.
(218) S.Lantomalala : 27-05-2021 - 17:30